Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Hoos u tiriso NASA SpaceX Crew-3 Lift Off
Duullimaadka Crew-3 wuxuu qaadi doonaa cirbixiyeennada NASA Raja Chari, taliyaha howlgalka; Tom Marshburn, duuliye; iyo Kayla Barron, oo ku takhasustay hawlgalka; iyo sidoo kale ESA (Wakaaladda Hawada Yurub) cirbixiye Matthias Maurer, oo u adeegi doona sidii khabiir ku takhasusay hawlgalka, saldhigga bannaan ee hawsha sayniska ee lix bilood ah.
NASA waxa ay bixin doontaa daboolka hordhaca soo socda iyo bilaabista hawlaha hay'adda SpaceX Crew-3 oo ay la socoto cirbixiyeennada Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare. Tani waa hawlgalkii saddexaad ee wareejinta shaqaalaha oo ay la socdaan cirbixiyeeno ku sugan dayaxgacmeedka SpaceX Crew Dragon iyo duulimaadkii afraad ee cirbixiyeenada, oo ay ku jiraan Duulimaadka tijaabada ah ee Demo-2, taas oo qayb ka ah Barnaamijka Shaqaalaha Ganacsiga ee wakaaladda.
Daahfurka ayaa lagu beegsanayaa 2:21 am EDT Axad, Oktoobar 31, gantaal SpaceX Falcon 9 oo ka socda Launch Complex 39A oo ku yaal NASA's Kennedy Space Center ee Florida. Crew Dragon Endurance waxaa loo qorsheeyay inuu ku soo xirto saldhigga hawada saacaddu markay tahay 12:10 am Isniinta, Noofambar.
Waqtigii kama dambaysta ahaa ayaa ka gudbay aqoonsiga warbaahinta ee tebinta shaqsiyeed ee daahfurkaan. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan aqoonsiga warbaahinta waxaa lagu heli karaa email ahaan: [emailka waa la ilaaliyay]
Dhammaan ka qaybgalka warbaahinta ee shirarka jaraa'id ee soo socda ayaa noqon doona mid fog marka laga reebo meelaha sida gaarka ah hoos ugu taxan, oo kaliya tiro kooban oo warbaahin ah ayaa la dejin doonaa Kennedy sababta oo ah cudurka faafa ee coronavirus (COVID-19) ee socda. Fadlan la soco in xarumaha saxafada Kennedy ay sii xirnaan doonaan inta lagu jiro munaasabadahaan ilaalinta shaqaalaha iyo saxafiyiinta Kennedy, marka laga reebo tiro kooban oo warbaahin ah oo heli doona xaqiijin qoraal ah maalmaha soo socda.
Daboolida hawlgalka NASA ee SpaceX Crew-3 waa sida soo socota (had iyo jeer waa Bariga):
7 -da duhurnimo (qiyaastii) - Dib -u -eegista Diyaargarowga Duullimaadka (FRR) Teleconference -ka Warbaahinta Kennedy (ugu yaraan hal saac kadib dhammaystirka FRR) ka -qaybgalayaasha soo socda:
• Kathryn Lueders, maamule ku -xigeen, Agaasinka Hawlaha Hawlaha Hawada, Xarunta NASA
• Steve Stich, maareeyaha, NASA Commercial Crew Program, Kennedy
Joel Montalbano, maareeyaha, Saldhigga Hawada Caalamiga ah, Xarunta Hawada Sare ee NASA ee Johnson
• Holly Ridings, agaasimaha duulimaadka, Agaasinka Hawlaha Duulimaadka, Johnson
William Gerstenmaier, madaxweyne ku xigeenka, Dhisidda iyo Duulimaadyada isku hallaynta, SpaceX
• Frank de Winne, maamulaha barnaamijka, International Space Station, ESA
• Junichi Sakai, maareeyaha, International Space Station, JAXA
Warbaahintu waxay su'aalo ku weydiin kartaa taleefanka oo keliya. Lambarada soo garaaca iyo koodhka, fadlan la xiriir qolka wararka ee Kennedy ugu dambayn 4 galabnimo Isniinta, Oktoobar 25, at: [emailka waa la ilaaliyay]
1:30 galabnimo (qiyaastii)-Dhacdada Warbaahinta imaanshaha ee Kennedy oo ay la socdaan ka qaybgalayaasha soo socda (xaddidan, hore loo xaqiijiyay warbaahinta qof ahaan kaliya):
• Bob Cabana, maamule ku xigeenka NASA
• Janet Petro, agaasimaha, NASA's Kennedy Space Center
• Cirbixiyeenka NASA Raja Chari
• Cirbixiyeenka NASA Tom Marshburn
• Cirbixiyeenada NASA Kayla Barron
• Cirbixiyeenka ESA Matthias Maurer
Ma jiro ikhtiyaar teleconference ah oo loo heli karo dhacdadan.
7:45 subaxnimo-Ka-qaybgalka Warbaahinta Virtual Crew ee Kennedy oo ay la socdaan cirbixiyeyaasha Crew-3:
1 duhurnimo-Teleconference-ka Warbaahinta Sayniska si looga doodo baaritaannada shaqaalaha Crew-3 waxay taageeri doonaan inta ay ku guda jiraan hawlahooda ka-qaybgalayaasha soo socda:
• David Brady, oo ah cilmi -baare ku -xigeenka barnaamijka Barnaamijka Saldhigga Caalamiga ah ee Johnson, ayaa bixin doona hordhac cilmi -baarista iyo teknolojiyadda saaran markabka Crew Dragon.
• Dr. Yun-Xing Wang, oo ah baare sare oo ka tirsan Shaybaadhka Qaab-dhismeedka Biophysics ee Machadka Qaranka ee Kansarka, iyo Dr. Jason R. Stagno, saynisyahano shaqaale ah oo ka tirsan Shaybaadhka Biophysics-ka qaab-dhismeedka ee Machadka Qaranka ee Kansarka. Wang iyo Stagno waxay ka wadahadli doonaan tijaabada kobaca borotiinka lebbiska ah ee ujeedadeedu tahay inay ku koraan meel u dhow microcrystals kaamil ah oo ku jira microgravity, kaas oo isla markiiba lagu falanqeyn doono sawir qaade awood leh marka ay ku soo noqdaan Dhulka iyagoo la socda astronauts Crew-2.
• Dr. Grace Douglas, oo ah hormuudka saynisyahanka dadaalka cilmi -baarista Tiknolojiyadda Cuntada Sare ee NASA, kaasoo ka hadli doona tijaabada Fiisigiska Cuntada. Baadhitaankani wuxuu daraaseynayaa saamaynta cunnada hawada sare ee la sii wanaajiyay caafimaadka cirbixiyeennada.
• Dr. Hector Guiterrez, borofisar ku takhasusay injineerinka farsamada iyo hawada sare ee Machadka Farsamada ee Florida, kaas oo ka hadli doona Smartphone Video Guidance Sensor (SVGS) kaas oo tijaabin doona jaantusyada LED-ka kaas oo Astrobee-ga duulista xorta ah ay la falgali doonaan inta lagu jiro samaynta duullimaadyada.
• Wakiil ka socda baaritaanka Halbeegga cabbiraadaha, kaas oo ururiya tiro cabbirro aasaasi ah oo la xidhiidha khataro badan oo duullimaadyada hawada sare ee aadanaha ka imanaya cirbixiyeennada ka hor, inta lagu jiro, iyo ka dib hawlgallada muddada dheer.
Jimco, Oct. 29
12 duhurnimo - Xog -hayaha Warbaahinta ee Maamulaha NASA TV -ga NASA oo ay la socdaan ka -qaybgalayaasha soo socda:
• Bill Nelson, maamulaha NASA
• Pam Melroy, ku xigeenka maamulaha NASA
• Woody Hoburg, cirbixiyeenka NASA
10 galabnimo – Shirarka hordhaca ah ee wararka ee Kennedy (wax aan ka horrayn hal saac ka dib marka la dhammeeyo Dib u eegista u diyaargarowga) oo ay weheliyaan ka qaybgalayaasha soo socda:
Steve Stich, maareeyaha, Barnaamujka Crew Commercial, Kennedy
• Joel Montalbano, maareeyaha, International Space Station, Johnson
• Jennifer Buchli, ku xigeenka madaxa saynisyahan, Barnaamijka Saldhigga Hawada Caalamiga ah, Johnson
• Sarah Walker, agaasime, Maareynta Howlgalka Dragon, SpaceX
• Josef Aschbacher, agaasimaha guud, ESA
• William Ulrich, sarkaalka hawada bilaabay, 45th Weather Squadron, US Space Force
Sabti, Oktoobar 30
10 pm – NASA Television ayaa bilaabmi doonta soo tebinta. Telefishanka NASA waxa uu lahaan doona tebin joogto ah, oo ay ku jiraan bilaabista, soo xidhida, hatch furan, iyo xaflada soo dhawaynta.
Axad, Oktoobar 31
2:21 subaxnimo - Bilawga
Soo tebinta TV-ga NASA waxay ku socotaa soo xidhidh, imaatinka, iyo xaflada soo dhawaynta. Beddelka shirka jaraa'id ee daah-furka, hoggaanka NASA ayaa bixin doona faallooyin inta lagu jiro baahinta.
Isniin, Nov. 1
12:10 subaxnimo - Ku xidhid
1:50 subaxnimo - Furitaanka Hatch
2:20 subaxnimo – Xaflad soo dhawayn ah
Daah-furka TV-ga NASA
Daboolida tooska ah ee TV -ga NASA ayaa bilaaban doonta 10 -ka fiidnimo Sabtida, Oktoobar 30. Macluumaadka NASA TV, jadwalka, iyo isku -xirayaasha si loo daawado fiidiyaha.
Maqalka kaliya ee shirarka wararka iyo daboolida daahfurka ayaa lagu qaadi doonaa wareegyada NASA “V”, oo laga heli karo iyadoo la garaacayo 321-867-1220, -1240, -1260 ama -7135. Maalinta bilawga, “maqalka hawlgalka,” waxqabadyada tirinta oo aan lahayn faallo bilawga NASA TV, ayaa la qaadi doonaa 321-867-7135.
Bogga NASA ee Daahfurka Daboolka
Daah-furka daboolka maalinta ee howlgalka NASA ee SpaceX Crew-3 ayaa laga heli doonaa mareegaha wakaaladda. Daboolista waxaa ku jiri doona baahinta tooska ah iyo cusboonaysiinta blogka oo bilaabmaya wax aan ka horrayn 10 pm ET Sabtida, Oktoobar 30, iyada oo heerarka tirinta ay dhacayaan. Fiidiyowga baahinta dalabka ah iyo sawirada bilawga ayaa la heli doonaa waxyar ka dib qaadista.
Ka qaybgal Daah-furka Dhab ahaantii
Xubnaha dadweynuhu way isdiiwaangelin karaan si ay uga soo qayb galaan daahfurkan ama ku biiraan dhacdada Facebook. NASA barnaamijkeeda martida farsamada ee hawshan waxa kale oo ka mid ah agabka daahfurka la diyaariyey, ogaysiisyada ku saabsan fursadaha la xidhiidha, iyo sidoo kale shaambada NASA baasaboorka martida dalwaddii (kuwa ka diiwaan gashan Eventbrite) ka dib bilaabista guusha leh.
NASA waxay bixin doontaa quudin muuqaal ah oo toos ah oo ah Launch Complex 39A ku dhawaad ​​48 saacadood ka hor qaadista qorshaysan ee howlgalka Crew-3. Iyadoo la sugayo arrimo farsamo oo aan macquul ahayn, quudintu waxay noqon doontaa mid aan kala go' lahayn ilaa baahinta hordhaca ah ay ka bilaabmayso NASA TV, qiyaastii afar saacadood ka hor inta aan la bilaabin.
NASA's Commercial Crew Program waxa ay gaarsiisay hadafkeeda ah in badbaado, la isku halayn karo, iyo gaadiid kharash-ool ah oo lagu tago lagana soo qaado Saldhigga Hawada Caalamiga ah ee Maraykanka iyada oo la kaashanaysa warshado gaar ah oo Maraykan ah. Iskaashigu waxa uu bedelayaa xadhkaha taariikhda duulimaadka hawada sare iyada oo u furaysa gelitaanka orbit-ka hooseeya ee Dhulka iyo Saldhigga Hawada Caalamiga ah dad badan, saynis badan, iyo fursado ganacsi oo badan. Saldhigga hawada sare ayaa weli ah marinka u boodboodka weyn ee xiga ee NASA ee sahaminta hawada sare, oo ay ku jiraan howlgallada mustaqbalka ee Dayaxa iyo, ugu dambeyntii, Mars.